Imwe nzira yeGoogle yakataurwa naseneta kubva kuAustralia | Linux Vakapindwa muropa
In the chinyorwa chapfuurar anga avaudza nezve kurwa pakati peGoogle nehurumende yeAustralia pamusoro pechisarudzo cheAustralia Kukwikwidzana uye Consumer Commission ye gadza kodhi yekutaurirana pane yakataurwa kambani uye Facebookon. Zvinoenderana nekodhi iyi, vese vanosungirwa kuita hurukuro nenhepfenyuro yenyika kana vachizvikumbira.
Vanobva kuGoogle vachityisidzira kuenda, vemuAustralia havana chokwadi chekuti vachakwanisa kurarama nemazvo.
1 Iyo nzira kune Google Yakavanzika kana nyika?
2 Chirevo kubva kumagidhi
3 Hapana asi kutyisidzira
Iyo nzira kune Google Yakavanzika kana nyika?
Kudivi rehurumende yeAustralia, vanotarisira kuti imwe kambani ichagara munzvimbo iyo inofungidzira kuramba isina chinhu. Mutungamiriri anozivikanwa kuti akaita hurukuro naSatya Nadella, maneja weMicrosoft.
Pane zvakatangira. Kwenguva yakareba Coca Cola haina kutengeswa mune dzimwe nyika nekuti yakaramba chikumbiro chevakuru vemunharaunda kuti iite fomura yayo kuruzhinji. Munyika idzodzo Pepsi akava mutungamiri wemusika.
Sekureva kweGurukota Rezvekutaurirana, Kuchengeteka uye Unyanzvi, Paul Fletcher:
Ini handizvione semunhu anopa wongororo yezvigadzirwa uye zviri pachena kuti Google ine chikamu chakakura kwazvo chemusika munyika medu kupfuura Bing, akadaro. Asi chii chiri pachena kubva kumusangano wakatangwa neMicrosoft ... ndechekuti ivo vanonyanya kufarira mukana wekukura mumusika kana Google ichida kubvisa.
Chirevo kubva kumagidhi
Nekudaro, havazi vese vanobvuma kuti mhinduro iri mumakambani akazvimirira.
Sarah Hanson-Mudiki ari seneta yekuSouth Australia uye inhengo yeAustralia Green Akapinda muParamende muna2008 uye akasarudzwazve dzimwe nguva ina. Iye chikamu chemakomiti Ekutaurirana neEzvakatipoteredza.
Hurumende inoda hurongwa kuitira kuti maAustralia varambe vachiwana ruzivo rwakakosha pamhepo kana injini yekutsvaga yeGoogle yanyangarika. Tinoda injini yekutsvaga yakazvimirira inoitwa mukufarira veruzhinji uye kwete kubatsira hofori yemubatanidzwa
Kutyisidzira kweGoogle kusiya Australia kunoratidza kuti hatigone kuvimba nemabhizinesi kuti atipe mabasa akakosha sekuwana ruzivo pamhepo. Uyu mukana wekuti hurumende iongorore kugadzirwa kweinjini yekutsvaga yeruzhinji inogona kunge iri suo reInternet kune veAustralia.
Kune paramende izvi zvinogona kureva kuti maAustralia vanogona kutsvaga paInternet vachiziva kuti data ravo harisi kutengeswa kune vanoshambadzira nemakambani.
Pamusoro pezvakanaka zveinjini yekutsvaga yaanofunga, akati:
Injini yekutsvaga yakazvimirira, yeruzhinji inogona kuve nhanho yakakosha pakudzorera yeInternet yakasununguka uye yakavhurika.
Injini yekutsvaga yeruzhinji inozvidavirira kuruzhinji uye kwete kune vagovani vemabhizimusi inogona kugadziridzwa nemaitiro epasirese epasirese epasi rese kuona kuti vashandisi vane yavo data uye vane simba pamusoro pe data rinounganidzwa nezvazvo uye mashandisirwo awo »
Pane kupokana, kana Google ikatsiviwa neimwe kambani:
Ivo vacharamba vachiwana purofiti kubva ku data revaAustralia uye vachange vane chikwereti kune izvo zvido zvevagovani
Hapana asi kutyisidzira
Zvisinei, chinhu cheGoogle chingangove chingotyisidzira chisina chinhu. Iyo kambani ichangoburitsa yakatemerwa vhezheni yeayo 'nhau yekuratidzira' muAustralia. Maererano neGoogle
inopa maonero akasimbiswa ezvinyorwa uye inovavarira kupa vanoburitswa venhau vanobatanidzwa dzimwe nzira dzekugovana nhau dzakakosha nevaverengi, nepo iine "yakanyanya kudzora yekuratidzira uye yekumaka.
Chigadzirwa chichawanikwa paGoogle News paApple, iOS, uye nharembozha webhu, uye paZivhura pane iOS.
Iyi yekutanga edition yeAustralia inoratidzira nhau icharatidza kutora chikamu kwevanomwe vaparidzi venhau vemuno.
Zvakadaro, ndinovimba kuti zano raSara richabudirira uye kuteedzerwa mune dzimwe nyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Imwe nzira yeGoogle yakataurwa naseneta anobva kuAustralia
Ehe, nekuti zvinofanirwa kunge zviri kuti Hurumende ichachengetedza zvakavanzika dhata uye sevhisi sevhisi. Kana ivo vachinetsekana zvakanyanya nezvekushandisa yekutsvaga nekuti ivo havavimbe kuti makambani anoteerera kune zvakavanzika zvavanoshandisa duckduckgo.
http://www.duckduckgo.com... yahoo.com…. altavista.com (ops esse morreu) pane mashoma kwazvo anozivikanwa nekuti iyo google inokurumidza uye inouya kubva pachiyero kureva.